China onye na-akọwapụta BT-9803M Onye na-emepụta ihe na ngwaahịa | BGT
Na-akọwapụta Onye Ọrụ BT-9803M
BT-9803M bụ ụdị MDBS ama ama maka sorbitol dabere na ndị na-akọwapụta ihe nke bụ ọgbọ nke abụọ.
BT-9803M bụ nnukwu arụmọrụ sorbitol dabere na (MDBS) Onye na-akọwapụta ihe nwere ogo ka mma. Ọ na-arụ ọrụ dị ka Onye na-akọwapụta ihe, site na ịmepụta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke obere spherulites (<1μm) n'oge jụrụ oyi nke polypropylene gbazee. Ndị a obere spherulites na-eduga na polypropylene nke meworo ka nghọta doo anya nke ọma ma belata haze ma e jiri ya tụnyere polypropylene nke a na-edoghị anya. Usoro iwu nke ngwaahịa a ka akwadoro site na FDA a na-anabata iji ya na kọntaktị nri na ahịa ụwa.
Nucleating gị n'ụlọnga bụ ụdị mmako nke kwesịrị ekwesị maka ezughị ezu crystallized plastik dị ka eyi na Pee. Site na-agbanwe crystallization omume nke resin na mee ngwangwa crystallization ọnụego, nwere ike nweta nzube nke shortening na ịkpụzi okirikiri, na-amụba doo anya elu gloss, rigidity, thermal deformation okpomọkụ, ike ọdụdọ na mmetụta na-eguzogide nke okokụre ngwaahịa.
Polymer gbanwetụrụ site Na-akọwapụta Onye Ọrụ, Ọ bụghị naanị na-ejigide njirimara mbụ nke polymer, kamakwa nwere ọnụahịa arụmọrụ ka mma karịa ọtụtụ ihe nwere arụmọrụ nhazi dị mma na ọtụtụ ngwa. Iji ihe eji eme ihe na PP abụghị naanị dochie iko, kamakwa dochie ndị ọzọ polymer dị ka PET, HD, PS, PVC, PC, wdg maka ịme mkpọ nri, mmejuputa ahụike, isiokwu ọdịnala maka iji ụbọchị, na-akọwapụta ihe mkpuchi na ihe ndị ọzọ dị elu.
CHINA BGT nwere ike inye zuru nso nke Onye na-ahụ maka ịgbanwu ihe, dị ka Onye na-akọwapụta ihe, Nnukwu ihe na-eme ka ihe sie ike na β-Crystal Nucleating Agent Enwere ike iji ngwaahịa ndị a na PP, PE, PET, PBT, NYLON, PA, EVA, POM na TPU wdg.
Nke gara aga: Na-akọwapụta Onye Ọrụ BT-808
Osote: Na-akọwapụta Onye Ọrụ BT-9805